PressReader - Isolezwe: 2019-01-10 - Umongo kasomqulu we-ANC wubumbano
Umongo kasomqulu we-ANC wubumbano
Isolezwe - 2019-01-10 - IZINDABA -
EMINYAKENI ewu-107 edlule abaholi abanohlonze oJosia Gumede, John Dube, Pixley ka Seme, Sol Plaatje, Albert Luthuli, izifundiswa, amakhosi, abefundisi nezinye izinhlaka zomphakathi bahlangana eBloemfontein ngoJanuwari 8, 1912 ukuzosungula iSouth African Native Congress nokwathi emuva kwesikhathi yaguqulwa igama yaba yi-African National Congress (ANC).
Ubuholi be-ANC sebenze uJanuwari 8 inkundla yokugqugquzela ukubusa ngentando yabantu, ubunye emiphakathini, ukulwa nendlala nokucobelelana ngamaqhinga okufuqa intuthuko. Isasasa elibonakale esifundazweni sikaMthaniya kulezi zinsuku likhombe ngokusobala ukuthi i-ANC ayilona iqembu lepolitiki kuphela kodwa iyinqolobane yolwazi, iwuphawu lwempumelelo, iwumphumela wokuzikhandla nokuzinikela, iyinkanyezi yethemba futhi ingumholi womphakathi jikelele.
Kusuka ngo-1912 ukusebenza kwe-ANC kwakhelwe phezu kwezimiso ezintathu nezaziwa nge-mass democratic movement.
Okokuqala, i-ANC yasungulwa ukuze ihole umzabalazo wokukhulula uquqaba engcindezelweni. Yingakho emlandweni we-ANC, izinselelo zezwe zazibaluleke ukwedlula iqembu futhi zazisetshenzwa ngaphandle kokubheka inzuzo. Imikhuba esijwayelekile kwi-ANC wukukhonza abaholi ngaphezulu kweqembu nezidingo zezwe futhi ayikaze ibe yingxenye yesiko leqembu.
Okwesibili, inkolelo enkulu ye-ANC ukusebenza ngokulawulwa yimigomo nezimiso zentando yabantu. Yingakho kuhlale kuseqhulwini ukusebenza ngokuvulelekile, ngokuhlanganyela, ngobunye nangokwethembana nemiphakathi.
Okwesithathu, i-ANC ibilokhu ingumholi womzabalazo wenkululeko yesizwe sonkana njengoba manje isisophondweni lokulethwa kwentuthuko. Yingakho imigomo ye-ANC ingaconsi phansi kuzo zonke izinhlaka zemiphakathi.
I-ANC isebenzisa uJanuwari 8 ukubika ngekwenzile onyakeni odlule futhi yenekele isizwe ngezinhlelo enazo onyakeni ophezulu. Kube wumqondo ophusile kubaholi be-ANC ukulethwa kwemicimbi yokudidiyela uhla lwamalungu ezishayamthetho, owokuzalwa kwe-ANC nokukwethulwa kwasomqulu wokhetho KwaZuluNatal. Izibalo zamathuna osopolitiki, abafelokazi nezintandane kuyizimpawu ezikhombisa isikhathi esinzima i-ANC yaseKZN ephuma kuso kule minyaka edlule.
Le micimbi yakhe ithuba lokukhumelana umlotha phakathi kwemihlambi eyalanayo. Iphinde futhi yakhombisa izwe ukuthi i-ANC ingompetha ekuzinukeni amakhwapha ukuze ilungise okonakele nokuyikhambi eseliyiphilise iminyaka engu-107.
I-ANC yehlelwa ukwesekwa okhethweni luka-2014 kwezinye izifundazwe, kepha eKZN kwenyuka ukwesekwa kwayo ngesibalo esikhulu. Ngomcimbi weJanuwari 8, i-ANC ikhombise abantu ukuthi iqembu libumbene futhi nomfelandawonye kanxantathu ubumbene. Isithombe esakhile siyibeke endaweni enhle yokubuyisa isithunzi, ukwethenjwa nokukhulisa isibalo sabazoyivotela ngokhetho oluzayo. Mayelana nohlu lwamalungu ezishayamthetho, umbuzo okubavoti ngothi “ngabe i-ANC ibenzile ubulungiswa yashiya amalungu ayamaniswa nezenzo zenkohlakalo, zokudelela izifungo nezinqumo zezinkantolo?”.
Ukwehluleka kwayo ukuthatha izinqumo eziqotho kosho ukuthi konke ekuzuzile kulezi zinsuku kuyoshabalala okwamazolo. Abavoti bazoqhubeka nokuyigxeka ngokungalaleli izakhamuzi nokungayilahlekisela ngukwethenjwa ngabavoti. Amehlo manje asethe njo emcimbini wokwethulwa kukasomqulu wokhetho eMoses Mabhida ngoMgqibelo. Ngabe isizwe singalindelani?
Eqhulwini lenkulumo kaMengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi azishaye isifuba ngomlando omude we-ANC wokuzabalazela inkululeko yabantu abamnyama.
URamaphosa kulindeleke ukuthi akhulume ngendima uhulumeni ka-ANC aseyilimile kusuka izakhamuzi zezwe zavota okokuqala ngo-1994.
Lapha ngingabala ukwakhiwa kwezindlu, izikole, imitholampilo nengqalasizinda kagesi, yemigwaqo, yamanzi neyezokuxhumana. Iqiniso elivunywa ngisho yizimbangi ze-ANC ukuthi uyabonakala umehluko osewenziwe ukuthuthukisa impilo yabantu abampofu. Futhi uzokugcizelela ukuthi kule minyaka engu-25 edlule beqhoqhobele izintambo zombuso, amaqhinga e-ANC okuletha intuthuko asebenze ngenkulu impumelelo.
Uzoveza amaqhinga amasha i-ANC ezowasebenzisa ukwenyusa isivinini sokulethwa kwentuthuko kule minyaka emihlanu ezayo, ikakhulukazi ukwakha amathuba emisebenzi nokwaba kabusha umnotho wezwe ukuze kufezeke iphupho lenkululeko yezomnotho.
Uzozishaya isifuba ngempumelelo yemikhankaso yakhe yokuheha abatshalizimali nosuthole ukwesekwa ngesamba esilinganiselwa kuR290 billion, ukwakha kabusha izinhlaka ezilwa nobugebengu nenkohlakalo ezifana neSAPS, oKlebe, iNPA neSARS, ukulungisa umonakalo ezimbonini zikahulumeni. Nakuba udaba lokuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo lusematheni, mancane amathuba okuthi uRamaphosa agxile kulona.
Abavoti abasoze baqhubeke nokuyithemba i-ANC uma isalwa yodwa. Yingakho kulindeleke ukuthi umongo kasomqulu we-ANC ugxile ekudluliseni umyalezo we-ANC ebumbene, ezakha kabusha ukuze isebenze ngezimiso zeqembu eliqotho nelilalelayo futhi elawulwa umbono nezinhloso eyaqalelwa zona ngo-1912 nokuyi-ANC efunde lukhulu ekubuseni izwe iminyaka engu-25 nesadinga elinye ithuba. UThabani Khumalo, umhlaziyi wepolitiki.